🥇 ▷ Ma dhamaadkii Gmail loogu talagalay Huawei? Laga yaabee, laakiin waxaa jira duruuf kale! ✅
Ma dhamaadkii Gmail loogu talagalay Huawei? Laga yaabee, laakiin waxaa jira duruuf kale!
Marka loo eego macluumaadka ku saabsan internetka, qof ka tirsan Google ayaa u sheegay Reuters in Huawei uusan awoodi doonin inuu u adeegto Google galka cusub 30. Haddii la xaqiijiyo, Huawei waa inuu raadsadaa bedel kale oo wax ka beddeli kara mid cusub. nidaamka hawlgalka. In kasta oo soo-saareyaashani ay bilaabeen HarmonyOS bishii Ogosto, waxay caddeeyeen inaysan u adeegsan doonin taleefannada casriga ah. Marka suurtagalnimada weyn waxay noqon kartaa nooc isha furan ee Android, oo la mid ah waxa ay Amazon u adeegsato kiniiniyadaada kaladuwan ee dabka. Si kastaba ha noqotee, waxaad kale oo dooran kartaa nidaam kale sida Sailfish. Si kastaba ha noqotee, astaamaha amniga ee OS-ka ayaa wali ah mid aad uga fog Android. Xusuusnow in Sailfish uu ku saleysan yahay ‘MeeGo OS’ oo ay adeegsatay Nokia N9 sanadkii 2011. Oo ka waran Gmail ka Huawei?
Markaan fiirineyno weli ma cadda waxa dhici doona, in kasta oo sida aan soo sheegay nidaam Android ku saleysan ay u badan tahay. Sikastaba ha noqotee, inaad awoodin inaad isticmaasho adeega Google micnaheedu waa maahan khariidadaha Google, Gmail, YouTube, PlayStore, iyo kuwa kale.
Gmail ahaan, waxay umuuqataa inuu jiro xal. Hal xalka ugu macquulsan waa ProtonMail. Sida laga soo xigtay barta internetka ee ProtonMail, Huawei waxay lahadashay shirkad sameeyahaan si loogu daro adeegyadan emaylka ah ee qarsoon ee noocyada mustaqbalka ee taleefannadeeda casriga ah. Taasi waxay tidhi, app-kaan emayl ah waxaa laga heli karaa dukaanka app Huawei AppGallery. Si kastaba ha noqotee, boostada ma oga haddii tani run ahaantii dhici doonto iyo haddii kale.
ProtonMail ayaa hada helaya macruufka macruufka ah iyo kuwa adeegsada Android, sidoo kale waxaa jira nooc internet ah oo loogu talagay desktop-yada iyo PC-yada. Waxay leedahay siro dhamaadka-dhamaadka-dhamaadka ah, taas oo macnaheedu yahay shirkadda ma akhrin karto fariimaha ay dirto ama hesho. Si kastaba ha noqotee, websaydhka shirkadda ayaa sidoo kale dhiirrigeliya amniga jir ahaaneed ee kaabayaasheeda, isagoo xusay inay “ku noolyihiin xarunta ugu amniga badan Yurub, 1000 mitir ka hooseysa dhagaxa adag.”
Maqaalka aan kor ku soo sheegnay ee ProtonMail wuxuu weli sheegayaa in Google uusan ixtiraamayn qarsoodiga isticmaalaha iyo barnaamij bilaash ah sida Gmail oo lacag badan ku iibisa xogta isticmaaleyaasha xayeysiistayaasha.